China Foni Screen Inochenesa fekitori uye vagadziri | SJJ
Nhare dzemunhu wese dzinochengetedza kupera kwemazuva ese uye kubvaruka, uye kuramba uchibata kunosvibisa nharembozha, uye iko kuvaka-kwetsvina kunoda kucheneswa nguva nenguva. Uye sei kuchenesa yako Smartphone iwe unganetseka? Uchishandisa yedu yekupukuta mawindow uye inonamira skrini yekuchenesa newe unogona kugadzirisa izvi pr ...
Nhare dzemunhu wese dzinochengetedza kupera kwemazuva ese uye kubvaruka, uye kuramba uchibata kunosvibisa nharembozha, uye iko kuvaka-kwetsvina kunoda kucheneswa nguva nenguva. Uye sei kuchenesa yako Smartphone iwe unganetseka? Uchishandisa yedu yekupukuta screen uye inonamira screen cleaner newe unogona kugadzirisa dambudziko iri.
Sticky Screen Cleaner inogadzirwa nemucheka wakajeka we microfiber, inogona kubvisa mafuta, tsvina uye zvigunwe zvemunwe kubva kumatehwe zvakachengeteka. Inogona kushambidzwa uye kushandiswazve kwenguva zhinji. Isu tinewo mamwe marudzi echidzitiro wiper akagadzirwa akapfava PVC uye PU dehwe rine kumashure rakasungwa ne microfiber seyakachena. Kwete chete inogona kuchenesa foni nguva dzese, asi zvakare inogona kushandiswa semidziyo.
Inoshandiswa seyekuchenesa screen, nharembozha uye nharembozha
Tsika logo inoitwa ne sublimation, yakadhindwa, yakashongedzwa uye yakazara ruvara.
Inogona kuwacha, yakasimba uye inoshandiswazve
Chinongedzo: Nharembozha Tambo, Chitambo Chepiri, Elastic Tambo, Bhora Chain, Keychain, nezvimwe.
Yakagadziriswa maumbirwo, hukuru, mavara uye zvigadzirwa zvinogamuchirwa.
Pashure: Foni Sungira
Zvadaro: Runhare Runako